Home Somali News Libiya oo diidan Qorshaha EU ee la dagaalanka Tahriibta
Dowlada Libiya ayaa diiday qorshaha Wadamada EU doonayaan inay uga hortagaan kooxaha ka ganacsada Tahriibta.
Qorshahan oo lamid ah kii EU-da ee la dagaalanka BurcadBadeeda Soomaaliya ayaa la doonayey in maraakiib iyo ciidamo ka socoda Midowga Yurub la geeyo xeebaha Liibiya, balse dowlada Liibiya ayaa sheegtay inay taasi tahay ku xadgudub Madax-banaanideeda.
Xukuumada Caalamka Aqoonsan yahay ee Libiya ayaa Salaasadii shalay si rasmi ah u sheegtay in ciidamo ka socda EU aysan soo geli karin biyaha iyo dhulka dalka Libiya.
Warkan kasoo baxay dowlada Libiya ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladaasi diyaar u tahay inay Midowga Yurub kala shaqeyso la dagaalana tahriibta balse aan lagu soo xad-gudbi karin badeeda iyo xeebaha dalkaasi.
Midowga Yurub ayaa hada diyaarinaya ciidamo ay si wadajir ah dalalkaasi u sameenayaan kuwaasi oo xaruntoodu noqon doonto dalka Talyaaniga.
Balse qorshahan ayaa u muuqda mid caqabad weyn hortaagan tahay kadib diidmada qayaxan ee ka timid dowlada Liibiya oo Qaramada Midoobay u gudbisay go’aankeeda.
Sidoo kale dowlada Ruushka oo xurguf siyaasadeed ka dhaxeyso Midowga Yurub ayaa sheegtay in ay horjoogsan doonto qorshaha EU-da hadii la horkeeno Golaha Amaanka, halka dalka UK uu oo isna xubin joogta ka ah golahaasi uu Midowga Yurub ka balanqaaday inuu qorshahan marsiin doono Qaramada Midoobay.
Deg Deg: Wiilka U Siilaanyo Sodogga U Yahay Oo Hada Ka Hadlay Inu Is Casilay Balse Muxu Ka Yidhi Arrinta Xutiyiinta + Muuqaal
Somaliland: Madaxweynaha Somaliland oo Iskaga Gudbay Xuddun illaa Bohol, caawa u Hoyday Ceel-afweyn